> Resource > Video > 5 Online YouTube Video G Free - Si Rasmi Ah
Jeclaan samaynta videos in dad kale la wadaagaan on YouTube? Maanta, aynu videos la online YouTube video gaare lacag la'aan ah. No rakibo software sameynta filimada looga baahan yahay, iyada oo aan kharash kasta. Iyagu dhammaantood waa laga heli karaa YouTube.com, si rasmi ah dib u eegis iyo shahaado.
Si fudud retouch aad Youtube videos leh filtarrada kala duwan, kala guurka iyo animations ama ku darto screens Intro & credit iyo saamaynta sida wareeg ah usii & mosaic. Baro More >>
Ogsoonow in aad u baahan tahay ansixin kuwaas video dejiyeyaasha on YouTube si ay u helaan macluumaad aad xisaabta si video geliyaan inta aan la isticmaalin.
Stupeflix Video Kan sameeyey,
A buuxa featured online video gaare inay sameeyaan xuub aad sawiro, videos, khariidado, qoraalka, music sheekada YouTube ah.
Faa'iido : mawaadiic dhawr ah, sawiro dejinta ka Facebook iyo DropBox, warqadda map ku salaysan goobta, la dhisay-in Saaladda music.
Qasaarooyinka : 270p iyo 60 ilbiriqsi xad khabiir, oo keliya mooyaane mashruuca la soo dhaafay.
>> Samee YouTube videos online la Stupeflix hadda.
Mid ka mid ah True Media Video abuurkii iyo Faalladaada
Mid ka mid ah Media True waa adeeg caan ah oo online video-qaadashada. Hadda waxa online ka shaqeeya oo la soo dhammaataan isku dhafan si ay u YouTube site.With Mid ka mid ah warbaahinta True, si fudud clip video iyo waxa lagu biiriyo photos, kala guurka, saamaynta, qoraalka.
Faa'iido : dhererka video dheer (10 min), nidaamka qaadashada movie saaxir-style, badan oo mawduucyada, subscribe to download videos in computer, badbaadin mashaariic dhawaan.
Qasaarooyinka : 100 MB / bishii video size, iyo 3 songs xisaab lacag la'aan ah (laakiin waxaad gali kartaa heeso adiga kuu gaar ah).
>> Samee YouTube video online la One True Media hadda.
Vlix - saamaynta video iyo qoraalka
Si fudud ku darto saamaynta ama qoraalka si ay u abuuraan videos weyn si ay u daabacaan si YouTube. Tiro balaadhan oo ah saamaynta video ka mid ahaa: dhalato, saasina mar, farshaxanka, sparkles iyo xuduudaha xiiso video iwm
Faa'iido : Easy in ay isticmaalaan, tan oo saamayn video, app lacag la'aan ah iPhone
Qasaarooyinka : 5 daqiiqo dhererka max, ma taageeri sawirka iyo muusikada.
>> In kor loo qaado videos hor leh Vlix wadaagga ah ee YouTube hadda.
GoAnimate, online codsiga aad u xiiso video aamusnaan ah, waxay kuu ogolaanaysaa inaad u samaysaa kartoon ah videos la foom oo diyaar u ah in la isticmaalo, oo aan u soo jiidi lahayn. Xitaa in aad la abuuro ee kabka gaar ah jilayaasha leh qalabka tafatirka awood badan kartaa.
Faa'iido : hab degdeg ah oo hab feature-buuxa ah laga heli karo, bilowdo ka template, funny si ay u abuuraan characters iyo wada hadal.
Qasaarooyinka : account xor ma gali kartaa sawirada iyo videos.
>> Samee YouTube animation videos online la GoAnimate hadda.
YouTube Video 3D Kan sameeyey,
Rasmiga YouTube 3D video abuure u ogolaanaya in la abuuro 3D videos isticmaalaya laba la mid ah kaamirooyin video.
Faa'iido : Si fudud si ay u abuuraan 3D video for YouTube la kamaradaha caadiga ah.
Qasaarooyinka , waayo, dadka isticmaala xirfadeed.
Waa kuwan tallaabooyinku fududahay in la sameeyo video 3D ah ee YouTube.
Talaabada 1: Place labada dhinac-ilaa-dhinac video kamaradaha ka dhanka ah midba midka kale, ka dibna aad ugu qortid videos.
Talaabada 2: naadiya labada video files si YouTube.
Talaabada 3: Booqo www.youtube.com/editor_3d.
Tallaabada 4: Ka dooro 'tagay' iyo videos 'saxa ah'.
Talaabada 5: Dooro .Wadashaqayntaas waqtiga iyo fursadaha in lays taagan.
Desktop Video abuura
Oo waxyaalahaas oo dhan, online video abuuray waa lacag la'aan iyo fududahay in la isticmaalo, kaliya isku day inaad hesho qalab aad u jecel yihiin in ay sameeyaan YouTube video. Dhanka kale, waxaa jira in badan oo xadka u online YouTube video gaare, ma aha oo kaliya qaababka, laakiin sidoo kale xawaaraha, sahlo in ay dib-u-edit, iyo kaydinta. Sidaas oo kale ayaan ku talin ah desktop video creator- Video Editor . Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u retouch kartaa video ama sawiro leh filtarrada kala duwan, kala guurka iyo animations ama ku darto screens Intro & credit iyo saamaynta sida wareeg ah usii & mosaic. Download oo isku day tani awood badan tafatirka qalab video hadda!